Ungayivumela Kanjani I-Pizza Yakho ... er ... Umkhiqizo Uzithengise Kuyo Online | Martech Zone
Ungayivumela kanjani i-Pizza Yakho… er… Umkhiqizo uzithengise Ku-inthanethi
NgoMsombuluko, Februwari 16, 2015 NgoLwesine, ngo-Okthoba 29, 2020 Douglas Karr
Umngani wami omuhle, uJames, ungumnikazi weBrozinni Pizzeria. Angizukuphambanisa - ngeqiniso i i-pizza ehamba phambili yesitayela saseNew York e-Indy. UJames usisizile kancane, waletha isimanga sakhe Iloli le-pizza lase-Indianapolis kwisikhwama semali ngonyaka owedlule futhi siphekela umcimbi olandelayo kuleli sonto esiba nawo. Ngokubuyisanayo, saqala ukumakhela isiza.
Lapho siqala ukuklama isiza, besazi ukuthi kunento eyodwa kuphela ebaluleke - ukuvumela ukudla kukhulume. I-Pizza ingukudla okuphelele kwezithombe - ezinemibala emangalisayo ongayizwa ngokunuka nje ngokubheka. Kungani ungazifihla izithombe ngozimele abancane kuyo yonke indawo egcwele ukuzulazula, izinsimbi eziseceleni, nenye indawo esetshenzisiwe? Ukusebenza noJames nethimba lakhe, sinqume ukuvuselela nokuguqula i- isihloko sokudlela esimangalisayo lokho kungabizi kakhulu.
Besingazakhela ingqikithi yangokwezifiso - kepha ngokuthembeka akusafanelekile ukuzama. Abaklami bezingqikimba benza nje umsebenzi omangazayo wokwakha izingqikithi eziguquguqukayo ezithengiswa izinkulungwane kepha ezingenziwa ngezifiso njengoba senzile ngesiza sikaBrozinni. Ingqikithi iza nazo zonke izinsiza:
Amafayela we-Photoshop uma kwenzeka ufisa ukwenza ngezifiso ihluzo zoqobo ezisetshenzisiwe.
Izakhiwo ze-Parallax kumnandi ukuzulazula nokuhlinzeka ngezinga eliphakeme lobuchwepheshe.
Imiklamo ephendulayo ezibukeka zizinhle kuselula noma kuthebulethi njengoba zenzayo kwideskithophu.
Amashothikhathi evumela izinkinobho, ukwahlukanisa okuvundlile, izithonjana nezakhiwo zekholomu.
Itimu yengane yakhelwe ngaphakathi ukuze ungadluli futhi wenze ngezifiso ingqikithi eyinhloko - evame ukubuyekezwa ngokusekelwa noma ukukhishwa kwezokuphepha.
Isizinda sabanjelwa kwi-Network Solutions ngakho-ke sanquma ukuya ngokusingathwa kweWordPress lapho… iphutha elikhulu. Siphelelwe ngumkhawulokudonsa ngokoqobo nje sibuyekeza amafayela wetimu! Ngenkathi ngicela usizo eqenjini labo lokusekela, bafuna ukungithengisa ngosizo lwezobuchwepheshe futhi bangishayele amahora okusebenza. Ugh.
Ngilume inhlamvu ngabeka isiza ohlelweni oluphelele lokusingathwa, kucindezelwe zonke izithombe kusetshenziswa uKraken, bese kulungiswa I-WP Rocket ukusiza ukusheshisa isiza. Sizobona ukuthi isebenza kanjani emasontweni ambalwa ezayo ngaphambi kokuthi sinqume ukuthi sidinga ukukuhambisa kumphathi ongcono.
Ngezansi: Kwakungekho nzima kakhulu futhi kungabizi ukwakha isiza esiyingqayizivele esinetimu enhle nokusingathwa okujwayelekile. Sizobheka manje ukuthi isayithi lisebenza kahle kanjani ngokusesha, ngenhlalo, nangama-oda wokuqhuba!
Tags: ubhutidesigndesign webiwebhusayithi
I-Socialdraft: Ikhalenda Lakho Lomphakathi Nenkundla Yokushicilela
Amathiphu amane abalulekile wokusebenzisa amafa wakho wesithombe
Jun 22, 2015 ku-10: 22 PM
UDouglas - Iwebhusayithi yokudlela ibukeka imangalisa, kepha ngokususelwa esihlokweni se-athikili benginethemba lokuthi ngizokwazi ukuya kwimenyu ngibone ukuthi isidlo ngasinye sokudla sibukeka kanjani ezithombeni! Esikhundleni salokho bekuyi "imenyu eyodwa yesikhulumi" engingathanda ukuxoxa nawe mayelana nokuthi iCrave.ly isiza kanjani ukuguqula lokhu futhi isize izindawo zokudlela ukuphatha amamenyu abo ku-inthanethi ngezithombe ukukhombisa ukudla njengoba ushilo, vumela ukudla kukhulume !
Jun 22, 2015 ku-10: 42 PM
Sawubona Bryan, kuhle lokho! Asibasizi ngenkuthalo kodwa ungafinyelela bese ubona ukuthi bayathanda yini. Sisanda kusebenzisa uhlelo abalucelile.